Kusvira ka19 Year OLD tasangana paGroup Chat – Makuhwa.co.zw
Kwaitonhorera kuchinairira musi weFriday when I was working late. Ndakatora kabreak mbichana ndokuita login pagroup chat yeMasasi eHarare.Pakanga pakazara varume vakawanda saka takatanga kutaura nezvepolitics.
Ndakashamisika ndawona kamessage kubva paneka 19 year old girl kanonzi SexyCleo kachiti kanakirwa neprofile pic yangu. We communicated for a while ndokuona kuti tainge tiine a lot in common.Boyfriend yake was kuLondon for two years uye iye akanga akangomumirira chete.
Pakutaura she described body yake zvinomisa mboro nekungoiverenga. Ndakatanga kumudenha denha ndichimunyorera twimajokes twesex.Ndopaakandiudza kuti I am making her kuti anzwe kuda kusvirwa and I should stop. Apa ndopandakapuwa green light kuti zvidobi zvirikushanda. Ndakatanga kuita cyber erot## naye..ndikamukissa kissa nekucaressa mazamhu ake. Tikabvisana hembe tichismoochana painternet. Akandiudza zvose zvaanoda kuitwa nemurume nezvese zvaanoda kuexperimenta nazvo pakusvirana. Tisati tatanga kusvirana panet akabva ati mari yake yakupera since she was painternet cafe.
Akandiudza kuti avekuita log off for a while achinotora mari paATM obva apfuura achimbonotenga coffee paanozodzoka.Pandakanzwa izvi ndakabva ndasimuka, locked my office and rushed off torwards the internet cafe where she had told me she was. Ndakabaya mafuta sendinopenga mota ikadzvova ichimhanya. Akanga andiudza zvaainge akapfeka pataibatana batana earlier on panet. Ndakasvika pakainternet cafe karipana first street ndokuona uno musikana aibuda akanga akaumbwa neushasha hwamwari.She was as she described. Akabuda achienda torwads kuATM ndokubva ndamuziva.
Ndakamhanya pakacoffee shop karipo ipapo ndokutenga two coffees mumatumbler etake away.Ndakafamba across kumuteera paATM pakange paine vanhu vanenge six or so ende iye ndiye akanga ariwekupedzisira. Musi uyu panze paitonhora and kuchipfunhirira kuine zidima.Dzakange dzave kuma7:30 manheru. Ndakamira kumashure kwake ndokumuoffer coffee. Akamboda kuramba ndikamuudza kuti ndanga ndichifunga kuti ndichapedza two matumblers but ndanga ndakwana. She agreed kuitora and she really appreciated the gesture. Takatanga kutaura tiripaline rekutora mari.
Since ndakange ndakuziva mainterest, hobbies,desires etc kubva pachat yangu naye and from our intimate experiance earlier on ndakamuimpressa zviriserious.Akange asina kana clue kuti ndini ani.
Akatora mari yake and I offered kumutengera imwe coffee. Takagara mucoffee shop for another cup and spoke some more. Akakanganwa nezvekudzokera kuInternet cafe kuye anakidzwa neni.Ndakazovhunduka kuti ndakanga ndasiya PC yangu irilogged on painternet all this time. Ndakamuudza kuti ndasiya computer yangu yakabaka kuoffice and I needed to shut it down. Akabvuma kuenda neni.
Tirimumota ndakamuridzira Sade uyu anga ari favourate artist wedu tese. Akashaya zvekuita awona kuti we had so much in common. Takasvika kuoffice ndokupinda muoffice mangu to log off. Iye akabva ati arikuda kuchecka mail yake. Pakaita login again pagroup akatanga kuverenga mamessages andakange ndamutumira ndokundiudza about the group telling me she met someone on this group and they were sharing sexxxy jokes. Akaverenga amwe mamessages andakanga ndamutummira ndokutanga kublasher akagara ega behind the screen.
This was my clue kuti avemustate yandakanga ndamusiya ari earlier on. Ndakauya kumashure kwakwe ndokubva avhunduka ndokuminimizer window regroup.Ndakatanga kurubber mashoulders ake ndokuona kuti akanga ari so tense. I told her to relax and she complied. Semunhu anogara arikumassage palour ndakuziva pekubata nekumassaga kusvikira zvanaka. Ndakamumassaga mashoulders, ndokudzika kumusana, ndikakwidza kumutsipa ndokunzwa musikana akungogomera achingoti ummm…ummmm..ohhh yeehh. Ndakamucaressa musoro patemple born, ndokumassager face slowly in circula movements mwana akabva anyura muswivel chair mangu. Ndakadzika ndokutanda kubata mazamhu ake akanga achiti minyatso twii kumira.Mwana aive nezamu rakaumbika iyeye. Kuita kunge mazamhu emu beauty magazine.
Akatanga kufema zviri deep ombochengeta breath yacho for a second ozoibuditsa mbichana mbichana semunhu ane asima.Ndakabvisa button one rakanga rakabata kadesigner jacket kake ndokusunungura kalace kakanga kakasunga blouse rake. Ipapo akanga avhara maziso aita zvekuita lean back akaita chest out. Ndakabva ndatanga kufambisa maoko angu
achitevedzera macurves emabreasts ake ayo akanga akatsvukira seri neseri kunge chimupoto high uye aine twima pores twinenge popo richango ibviriraso. Ndakatenderedza mafingers angu ndukutswinyirira minyatso yake. Ipapo akabva atanga kubvundirira ndokuchemerera zvirikure kure.
Related Topics:Kusvira ka19 Year OLD tasangana paGroup Chat